Android Wear 20 | off-road စမတ်နာရီဖြစ်သော Casio Pro Trek WSD-F2.0 ကိုသင်ယခု ၀ ယ်ယူနိုင်သည် Androidsis ပါ
Android Wear 20 ပါသောမြေမျက်နှာသွင်ပြင်စမတ်နာရီဖြစ်သော Casio Pro Trek WSD-F2.0 ကိုယခုသင်ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။
စမတ်နာရီများသည်အစနှင့်ဆက်စပ်နေခဲ့သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုစောင့်ကြည့်Casio Pro Trek ၏ကိစ္စတွင်၎င်းသည်ဒီဇိုင်းနှင့်၎င်း၏အသွင်အပြင်နှစ်ခုလုံးကိုအစွန်းရောက်အားကစားကိုနှစ်သက်သူများအတွက်စဉ်းစားထားသောကြောင့်၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သံသယ ၀ င်စရာမလိုပါ။
အဆင့်မြင့်မော်ဒယ်များနှင့်စမတ်နာရီဈေးကွက်တွင်ထုတ်ဖော်ပြသသောဂန္ထဝင်နာရီထုတ်လုပ်သူများနှင့်မတူပါ ထူးခြားသော wearablesCasio သည်၎င်း၏ device အသစ်သည်လွန်ခဲ့သော ၅ နှစ်ခန့်ကထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည့်စီးရီးတစ်ခု၏ဆက်နွယ်မှုဖြစ်သောကြောင့် Casio သည်ကွဲပြားသောချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ စမတ်နာရီ.
Casio Pro Trek ကိုပထမဆုံးကြေငြာခဲ့သည် ကို CES 2017မရ။ ၀ ယ်ဈေး၊ ရနိုင်သည့်ရက်စွဲကဲ့သို့အရေးကြီးသောအသေးစိတ်အချက်များစွာကိုမကြေငြာခဲ့သော်လည်းယခု ၃ လအကြာတွင် gadget သည်နောက်ဆုံးတွင်ရောင်း ၀ ယ်သွားပြီဖြစ်သည်။
နာမည်အပြည့်အစုံနဲ့ Casio Pro ကို Trek WSD-F20အထက်ပါပုံတွင်မြင်နိုင်သောစမတ်နာရီသည်ကြိုတင်တပ်ဆင်ထားသည် Android Wear 2.0 ၎င်းသည်သဘာဝလုပ်ဆောင်မှုများကိုနှစ်သက်သူများအတွက်အံ့သြဖွယ်ရာများဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ဘယ်သူကမှမင်းကိုအားကစားရုံထဲခေါ်သွားတာကိုတားမှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းကသစ်တောတွေ၊ တောင်တွေလိုသဘာဝပတ် ၀ န်းကျင်အတွက်ပိုသင့်တော်ပုံရတယ်။
ဟာ့ဒ်ဝဲပြုပြင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ Casio Pro Trek WSD-F20 အသစ်သည်ယူဆောင်လာသည် MIL-STD-801G လက်မှတ် (ရေအနက်မီတာ ၅၀ အထိ) နှင့်aသုံးစွဲမှုနည်းသော GPS အာရုံခံကိရိယာ စမတ်ဖုန်းမသုံးဘဲခရီးသွားရင်မင်းရဲ့လမ်းကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြဿနာမရှိပဲမှတ်တမ်းတင်ပေးမယ့်စွမ်းအင်
ဖြတ်. မြေပုံမိုဘိုင်းလ်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုမှတဆင့်နာရီကိုတိုက်ရိုက်သုံးရန်သင်၏လမ်းကြောင်း၏မြေပုံများကိုကြိုတင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။ ဒါ့အပြင် function လို့ခေါ်တဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပါ တည်နေရာမှတ်ဉာဏ်WSD-F20 သည်သင်သွားရာလမ်း၌သင်တွေ့ဖူးသောစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးနေရာများကိုလျင်မြန်စွာကူညီလိမ့်မည်။ ဤအရာသည်ဓာတ်ပုံမရိုက်မီနေရာအသစ်များရှာဖွေရင်းသဘာဝကိုစူးစမ်းနေသောဓာတ်ပုံဆရာများအတွက်အသုံးဝင်သည်။
Casio Pro Trek WSD-F20 အသစ်ကိုယခု ၀ ယ်ယူနိုင်ပါပြီ ထုတ်လုပ်သူရဲ့ website ကို စျေးနှုန်းဒေါ်လာ ၅၀၀ ဖြင့်၎င်းသည်လာမည့်ရက်သတ္တပတ်များအတွင်းကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံရှိအထူးစတိုးဆိုင်များသို့လည်းရောက်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » စမတ်နာရီ » Android Wear 20 ပါသောမြေမျက်နှာသွင်ပြင်စမတ်နာရီဖြစ်သော Casio Pro Trek WSD-F2.0 ကိုယခုသင်ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။